5 Saffarada Day From Milan By tareenka | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 5 Saffarada Day From Milan By tareenka
Waa ay adag tahay in ay doortaan kaliya 5 Maalinta Easy safarada From Milan By tareenka si ay u share aad la. caasimada fashion Italy waxaa waari la doorasho ee dalxiiska ee booqanaya. Ma aha oo kaliya waxaa ka buuxda fashion, laakiin waxa ay leedahay taariikh cajiib ah, naqshadaha iyo muuqaal qurux badan to write home about.
1. 5 Saffarada Day From Milan By tareenka: Lake Como
Our Trip ugu horeysay Maalinta Easy From Milan waa in Italy saddexaad u gudubno ugu weyn, waayo, maalintii tareen, iyo la kulmaan dalxiisayaal raaxo leh ku wareegsan biyaheeda. Maxaa ka fiican in ay la kulmaan cajiib ah Alpine muuqaal qaanso ee doonnida, iyo sidoo kale helitaanka fursad ay ku qaataan peek dhuumasho ah ee guryaha Wabiga qurux on xeebaha ay.
Meesha bartamaha Lake Como waa ugu booqday qayb ka mid ah u gudubno,, iyo in kastoo meelaha waqooyiga iyo koonfurta ah ee badda ay sidoo kale meelaha xiisaha ay kuwan guud ahaan waa ka yar cajiib ah: Dabcan, isagoo dhan ka soo jiidashada ugu weyn ee ilaa xad ku dhow wada sidoo kale waa ku haboon kooxda martida waqti kooban.
Ogow in mararka qaarkood magaalooyinka isu dhaw yihiin, laakiin kala baddii! dhibaatada No, waxaa jira huuriyada si joogto ah guud ahaan u gudubno, si TRAVEL fudud yahay (maraakiibta baabuurta yar soo noqnoqda iyo shaqeeyaan ka yar boosteejada doon badan doonyo rakaab).
laga yaabaa in la yaabay si aad u baran in Switzerland waa uun safar maalin caasimada Italy iska. Hop on Bernina Express ka Tirano iyo aad waxaa jiri doona in kaliya labo saac iyo bar ah.
safarka ayaa lafteedu waa qiimo u: tani waa safarka steepest tareenka ee dunida, ka baxaya 429 mitir ilaa in ka badan 1800 in the Swiss mountains. The stunning alpine scenery viewed from the train window will mean you will not want to leave the train.
Waxaad dhammaan doontaa ilaa magaalada Swiss of St. Moritz, mid ka mid ah Switzerland ugu jiga buurta caanka ah. This is where the rich and famous spend their holidays or own a chalet.
St. Moritz ma aha magaalada Alpine muuqaal dabiici ah caadiga ah. Waxaan aaminsanahay in raaxo waa sharaxaad dheeraad ah oo ku habboon ka badan qurux badan. degaanka ku hareereysan waa qurux badan inkastoo iyo weheliso jawiga gaarka ah ee magaalada, fasax cajiib ah waxaa gabi ahaanba damaanad qaaday.
St. Moritz dhigaysa saldhig kaamil ah si ay u sahamiyaan koonfureed ee Kantoonka ee Graubünden. Ma aha saldhig wanaagsan safarada maalintii qaybaha kale ee Switzerland, sida in qaadan lahaa oo aad u badan waqtiga safarka. waa, si kastaba ha ahaatee, mid ka mid ah hogaanka 5 Saffarada Day From Milan By Tareen in kastoo! ka cawayska ee magaalada Marka laga reebo, hawlaha ugu muhiimsan ee halkan waa dibadda. Haddii aad jeclaan tug, baaskiilka ama isboortiga qaboobaha, aad naftaada ku raaxaysan kartaa toddobaad ee gobolka this cajiib ah.
3. 5 Saffarada Day From Milan By tareenka: Bergamo
Booqashada Bergamo waxaa inta badan lagu daray safarka Lake Como, laakiin waxa ay sidoo kale xusid mudan in ay meel u gaar ah oo ku saabsan 5 Saffarada Day From liiska Milan By tareenka!
Leh oo ay derbiyo taariikhi taagay shan kiiloomitir in hareerayn magaalada jir, iyo naqshadaha Dr Makumbe barwaaqo badan in ay eegaan, waxaa heysta mu'aamaraad weyn dalxiisayaasha raba meel soo jiidasho leh si ay u qaataan maalinta.
Raaco Tariin ka hooseysa in ay dusha sare ee magaalada, iyo eegno Bergamos taxadiri weyn, sida St ah. Maria Maggiore Cathedral iyo Chapel Colleoni ah.
Last, laakiin ma ugu yaraan, ha iloobin in aad daqiiqad ku qaadato si ay u mahad Bergamo cajiib koobay, la hills iskala for miles, oo dhan si ay fog Lake Como hoos ku.
Milan in ay Tareenadu Bergamo
Mantua in Tareenadu Bergamo
Sida loo Tareenadu Bergamo
Oo tababartay jeelka si Bergamo
Gobolka Franciacorta waxay bixisaa qaar ka mid cajiib ah, abaalmarinta ku guuleystay raagay aad u muunad, in ka mid ah muuqaal qurxoon Talyaani.
Hel fursad ay ku kulmaan isu soo saarayaasha khamrigii! Weydii su'aalo ku saabsan habka ee winemaking, iyo waxa ay ka dhigeysaa in ay brand gaar ah si delicious.
The aagga Franciacorta DOCG ka kooban yahay oo ku saabsan 3,000 hektar oo canab ah oo daboolaya qaar ka mid ah dhulka rogid yaab leh muuqaal dabiici ah oo keliya koonfurta ee Lake Iseo ee gobolka Italys Lombardy. Tani waa masaafad candhuuf of badan oo kale oo caan Talyaani gobollada khamri, sida Piedmont galbeed iyo Conegliano Valdobbiadene (guriga ee premium super Prosecco) to the east.
Goobtan ayaa Ra'iisul dhigaysa Franciacorta meel fiican ku cararaan jaceyl ama safar khamri si fiican u qalmay, saacado ah ku turaanturoon ka Milan, it is accessible and beautiful in equal measure.
agagaaraha The Olimpico ee Franciacorta runtii waxay bixiyaan wax gaar ah, laakiin shopping sidoo kale waa weyn sidoo kale! The outlet design Franciacorta badan ee beec u bixiyaan dukaan wax bixio, si loo hubiyo in la sameeyo si loo heli gacmahaaga alaabta halkan.
Jeelka si ay Tareenadu Brescia
Bergamo in Tareenadu Brescia
Milan in ay Tareenadu Brescia
Treviglio in Tareenadu Brescia
5. 5 Saffarada Day From Milan By tareenka: Venice
Our liiska 5 Saffarada Day From Milan By Tareen ma noqon doono dhamaystiran oo aan ku jiraan Venice! Maxay noqon karaan waxa ka khayr badan qaadashada safarka maalinta ka Milan ah in mid ka mid ah Italy magaalooyinka romantic ugu qiimeeyeen, Venice? In kastoo ay adag tahay in ay ku habboon oo dhan Venice farxaan galay hal maalin oo kaliya, dhab ahaan waxaad isku dayi kartaa.
Warwareegaan ay qabow, jidadka cobbled. Hayso kafeega ah ee caanka ah Piazza San Marco. Perhaps even stretch to riding a gondola through the canals for a truly special experience.
Waxaad shaki ku jirin in la haboon sixri by haro badda ee la dhalaalayay. Ku raaxayso Architecture fantastic in lagu tilmaamay mid ka mid ah Italy ugu magaalo caan ah dalxiisayaasha.
Haddii aad weli waqti, madaxa ka weyn si ay mid ka mid ah Venice dhow jasiiradaha. Murano caan ku tahay muraayad ah buunafuufid xusuus dhaqanka, iyo laga yaabee iibsato trinket ah in ay guriga dib ugu qaado.
Ready in ay waayo-aragnimo 5 Saffarada Day From Milan By tareenka? Madax ka badan si ay u Save A tareenka Hadda! No ajuurada qarsoon, dhibaatana ma leh!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “5 Maalinta Easy From Milan By Tareen safarada” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/day-trips-milan-train/ የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Bergamo comolake Daytrips EuropeByTrain milan tareen safarka Talooyin safarka tareenka travelvenice